दिनमा बढिमा तिन खेल हुन्छन्, विश्वकपमा अहिले । हरेक दिन हरेक देशको खेल पर्दैन । खेल नखेल्ने दिन विश्वकपमा खेल्ने फ्रान्सेली खेलाडीहरुले के गर्छन् ? कसरि बिताउँछन् ? के ति हरेक दिन अरु देशको खेल हेर्न रंगशालानै...
जुन १५, २०१८
पेरिसमा फ्रान्सेलीहरुले नेपाली मम बनाउन सिकेका छन् । उनीहरुले नेपालीहरुबाट मम बनाउने काईदा सिकेका हुन् । जुनको २ र ३ का दिन नेपाली सांस्क्रितिक ग्रिहले पेरिसको भाँसँ पार्कमा नेपाली मेला रखेको थियो । त्यहि मेलामा मम बनाउन...
जुन ४, २०१८
नेपालका विभिन्न भागका भेषभुषा, संस्कृति, नेपाली खाना, हस्तकला र पर्यटकिय आकर्षणका वस्तुहरुको प्रदर्शनी गर्दै पेरिसमा आयोजित दुई दिने मेला हिजो आइतवार सम्पन्न भएको छ ।...
जुन ३, २०१८
फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हिजो शनिवारदेखि १५ं औ नेपाली मेला शुरु भएको छ । मेला आज आईतवार साँझसम्म चल्ने छ । सन् २००२ मा स्थापना भएको नेपाली सांस्कृतिक गृहले मेलाको आयोजना गरेको हो । पेरिसस्थित ब्वा द भाँसेन...
मे २९, २०१८
बिदेशीको मदर्स डे हाम्रो आमा खुवाउने औंशी । यो पर्वलाई विकसित देशमापनि खुब महत्व दिईन्छ । फ्रान्समा यो मदर्स डे (फेत दे मेयर्) मा ठूला ठूला सुपरमार्केटले ताप्के, डाडु र पनियो, कराइ, कसौंडी, चम्चा, कांँटा, चक्कु, पानी...
मे २६, २०१८
आगामी जुन महिनाको दोस्रो र तेस्रो दिन (june 03, 04) पेरिसमा नेपाली मेला आयोजना हुँदै छ । यो मेला नेपाल बिर्साउने खालको हुन्छ । अर्थात् यो मेलामा छिरेपछि नेपालकै कुनै ठाउँमा आयोजित मेला जस्तो लाग्छ । पेरिसको...
फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपती निकोला सार्कोजीलाई आज प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । आफ्नो राष्ट्रपतीय निर्वाचन क्याम्पेनकालागि लिबियाका राष्ट्रपती मुअम्मर गद्दाफीबाट अबैध रकम लिएको आरोपमा हिरासतमा राखेको हो । एकैचोटीको ट्रान्जेक्सनमा ५० करोड युरो लिएको देखिएको दाबी लिबिया र...
जनवरी २८, २०१८
फ्रान्सका युवा राष्ट्रपती मानुयल माक्ख्रों सोचियजति लोकप्रिय हुन सकेका त छैन तर उनी अघिल्ला राष्ट्रपतीहरु झैं निर्वाचनपछी बदनाम भैहालेकापनि छैनन् । त्यसको ए उटा कारण मध्ये फ्रान्सेली संसदमा महिला सांसदहरुको संख्या बढाउनुपनि हो । उनको निर्वाचनकालमा एक्कासी...